बिगुल न्यूज - DB, Author at बिगुल न्यूज
साउन ०१, २०७५ बिगुल न्यूज - DB
काठमाडौँ । पोखराको नयाँ सडकमा रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटको अण्डरग्राण्ड पार्किङमा पार्क गरिराखेको एउटा कारमा आगो लागेको छ । मंगलवार दिउँसो तिर उक्त पार्किङ गरी राखेको बा ८ च १०५० नम्बरको कारमा आगो लागेको …
काठमाडौं । चितवनको मुग्लिनबाट दुई जना व्यक्ति एउटा दुर्लभ बन्यजन्तु सालकसहित पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले चितवनको मुग्लिनबाट एउटा जिउँदो सालकसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ …
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध यही साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । काँग्रेस महामन्त्री डा शशांक …
गायिका सिता भण्डारीको दमदार तीज गीत “माइतीराजै” सार्वजनिक ( भिडियोसहित )
काठमाडौँ । हिन्दू नारीहरुको महान् चार्ड हरितालिका तीजको अवसर प्रतिभाशाली गायिका सीता भण्डारीले “माइतीराजै” नामक तीज गीत लिएर बजारमा आएकी छन्। गायिका भण्डारीको तीज गीत माइतीराजै आज साउने सक्रान्तिको अवसर परेर तरेली …
बुढाथोकीको दराज फोडी चोरी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ !
काठमाडौँ । उपत्यकाभित्र हुने गरेका विभिन्न चोरीका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले भक्तपुर चागुनारायण–७ निवासी ४० बर्षिय पशुपति रिमाललाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसर उनीविरुद्ध भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी–६ का नविन बुढाथोकीको घरमा …
सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलको सुरक्षा नेपालीले गर्ने, कतारले गर्यो यस्तो प्रस्ताव !
काठमाडौं । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको सुरक्षा नेपालीके गर्न पाउने भएका छन्। कतारले २०२२ मा आफ्नो देशमा हुने विश्वकप फुटबलको सुरक्षार्थ ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई लैजाने प्रस्ताव नेपाल …
माइतीघरमा सरकारविरुद्ध नेवि संघको विरोध प्रदर्शन !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विधार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ ) ले सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र देखाएको भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार राजधानी काठमाडौंको माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्म सरकार …
श्रीमती घरमा नभएको बेला कुकुरमाथि कुकृत्य, जन्मकैदको सजायँ हुन सक्ने
एजेन्सी – भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा एउटा अचम्मको घटना घटेको छ। जहाँ एक ३५ वर्षीय पुरुषलाई कुकुरमाथी शारीरिक सम्पर्क बनाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले घरमा श्रीमती …
अबदेखि विदेश जाँदा र फर्किँदा धेरै पैसा बोक्न नपाइने, हेर्नुस् कति बोक्न पाइन्छ ? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । अबदेखि नेपाल आउँदा र विदेश जाँदा मनपरी नगत बोक्ने नपाईने भएको छ। आज साउन १ गते अन्यन आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाँदा र स्वदेश फर्कँदा बोक्न पाईने रकमको सिमा …
काठमाडौं । सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको असामहिक निधन भएको छ । निमोनियाबाट पिडित मेयर सुब्बाको उपचारको काठमाडौँको धापासीमा रहेको ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको हो । मेयर सुब्बाको दुईसाता अघिदेखि …